Apple MacBook | Waxaan ka socdaa mac
Maarso 9, 2015 waxaa lagu xasuusan doonaa soo saarista MacBook-ga cusub, haa, magaca kumbuyuutarkan cusub ee Apple waa: MacBook.
Waxaan wajaheynaa laptop-ka Apple oo leh cabirro runtii cajiib ah waxaan dhihi karnaa waxaan wajaheynaa Mac-ga ugu caansan ee la yaqaan ilaa maanta, kana sareynay xitaa MacBookga khafiifka ah. MacBook-kan ayaa leh 13,1mm qaro weyn, culeyskiisu waa 0,9kg oo wuxuu leeyahay 12-inch Retina bandhigay taasi way ka farxin doontaa dadka isticmaala.
Riwaayad kale oo ku jirta buug-gacmeedyadan 'Macbook' waa raad-raaca kacaanka, Force Touch Trackpad-kan cusub wuxuu ku darayaa guji isku mid ah dusha sare oo dhan iyo dareemayaal cusub ayaa lagu darayaa si loo ogaado xoojinta isticmaalaha markaad riixeyso. Ismaamul ka kooban 9 saacadood marka loo eego Apple lafteeda iyo tan cusub iyo hal dekedda USB-C waa qaar ka mid ah faahfaahinta MacBookgan cusub.
Waxaan sidoo kale iftiimin karnaa in Apple ay baabi'ineyso astaanta gadaal ee astaanta u ah shaashadda gadaashiisa, kooxdan cusub waxay ku darsaneysaa mid aad ugu eg midka iPads-ka hadda jira waxaana lagu heli karaa saddex midab: Lacag, Gray Space iyo Dahab.
Warar ku saabsan MacBookga cusub
Halkan waxaad ku arki kartaa dhammaan wararka soo baxa maalin kasta ee ku saabsan Apple MacBook cusub.
Shaashada MacBook Pro waxay si toos ah ula qabsan kartaa isticmaalaha
Haddii dhammaan shatiyada Apple ay noqdaan kuwo run ah, in ka badan kombuyuutarrada waxaan haysan lahayn sida wax-garad yar oo aan awoodno….
Kharashyada dammaanadda ee ay bixiso Apple ayaa sannadba sannadka ka dambeeya hoos u dhaca
Qaar badan oo naga mid ah kama warqabaan kharashka shirkad weyn sida Apple si ay u daboosho dhammaan dhibaatooyinka ...
MacBookga 2022 wuxuu la imaan karaa magac cusub
by Manuel Alonso samee Bilaha 3 .
Hawo MacBookga waxaa la filayaa in dib u qaabayn lagu cusboonaysiiyo wakhtiyada. Qaabka ugu khafiifsan iyo...
Apple waxay awoodi doontaa inay ku iibiso 80% wadarta laptops -ka ARM ee suuqa sanadkan
Shaki kuma jiro in ballanqaadkii Apple ee xilliga cusub ee Apple Silicon Macs uu ahaa…
12-inji MacBook dadka isticmaala waxaa baaray Apple
by Tony Cortes samee Bilaha 6 .
Apple waxaa laga yaabaa inay ka fekereyso inay dib u bilowdo MacBook 12-inji ah. Wuxuu bilaabay 2015 wuxuuna ...
Isticmaalayaal badan ayaa ka warbixiyay Jabka Shaashadaha aan Caadiga ahayn ee MacBooks -ka Silicon -ka Cusub ee Apple
Dhowr isticmaale ayaa ka warbixinaya isla dhibaatadooda MacBooks -ka shabakadaha bulshada: shaashadda ayaa jabaysa iyada oo aan ...
12-inch MacBook ayaa lagu daray liiska Apple "Vintage"
Shirkadda Cupertino ayaa hadda ku dartay MacBook Retina ...
by Qolka Ignatius samee Bilaha 8 .
Iyadoo la bilaabay 12,9-inch iPad Pro oo leh muuqaal yar oo LED ah, isticmaaleyaal badan ayaa sugaya imaatinka ...
by Manuel Alonso samee Bilaha 10 .
Kiiboodhka balanbaalisku waa inuu ahaadaa (oo uu) aad ugu xun yahay wali in laga hadlo. Sidaas…
by Manuel Alonso samee Bilaha 11 .
Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee aan qabno milkiileyaasha MacBook (Waxaan u maleynayaa laptop kasta, laakiin gaar ahaan ...
Apple Silicon MacBooks waxay hayaan isla kamaradda 720p
Waxaa jira waxyaabo aan caqli gal ahayn ama sharaxaad lahayn. Shalay waxaan kaqeyb galnay muxaadarada Apple halkaas oo seddex lagusoo bandhigay ...
Batariga Mac iyo halyeeyada magaalooyinkiisa